Haasya Bangya | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 20
धुर्मुस सुन्तलीबिनाको मेरीबास्सै भोली टिभीमा आउँदै, के भन्छन् धुर्मुस ?
मिडिया हब र धुर्मुस सुन्तलीबीच हुने बार्ता सकारात्मक भएन र सहमतिमा टुङ्गिएन भने मेरी बास्सैमा न फतौरी बूढी हेर्न पाईने छ न मुस्कान पाशाको रमाईलोमा हास्न पाइने छ । मिडिय..
यमन श्रेष्ठको रमाईलो जन्मदिन : जन्मदिनमा आफैले भने आफैलाई आई लभ यू
आज संगीतकार तथा कलाकार यमन श्रेष्ठले जन्मदिन मनाएका छन् । उनले आफुले आफैलाई जन्मदिनको शुभकामना दिदैँ लेखेका छन्, डियर यमन ह्याप्पी बर्थ डे टु यु , आई लभ यू । उनको स्टाट..
एनटिभीमा ब्रेकफेल : जिरेखुर्सानी बन्द
हास्य टेलिसिरियल जिरे खुर्सानीमा देखिदै आएका अधिकांश कलकारले, ब्रेकफेलसँगै दर्शक भेट्ने भएका छन् । ब्रेकफेल नेपाल टेलिभिनमा, सोमबार राती ८ ः ४५ बजे आजैदेखि प्रशारण हुँद..
मनोज गजुरेल रुखमा उदोमुन्टो परेपछि ….
मनोज गजुरेलले परिवारसहित पोखरा पुगेर मस्ती गरेका छन् । देश विदेशका मेला महोत्सवमा दर्शक हसाउन ब्यस्त रहने गजुरेलले परिवारसँग पनि रमाइलो गरेका छन् । उनले पोखरामा खिचिएका..
दर्शने र मनमायाको मस्तिराम (ट्रेलसरहित)
हाँस्य टेलिश्रृंखला बन्द भएपछि फुर्सदिला भएका हास्य कलाकारहरु युट्युब केन्द्रित भिडियो र फिल्म बनाउनमा व्यस्त छन् । हाँस्य टेलिश्रृंखला मेरी बास्सैमा दर्शनेका नामबाट पर..
फेरी आउने भयो भद्रगोल
प्रशारण बन्द भएको हाँस्य टेलिश्रृंखला भद्रगोल पुनः प्रशारण हुने भएको छ । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण हुँदै आएको भद्रगोल केही महिना अघिदेखि प्रशारण बन्द भएको थियो । साथै अ..
काङ्ग्रेस निर्वाचनपछि नक्कली देउवा यसरी जङ्गिए (भिडियोसहित)
देशमा जुझारु युवा नेताको आवश्यकता आम जनताले महसुस गरेका छन् । तर, देश होस् वा राजनितिक पार्टी, नेतृत्व तहमा कपाल फुलेका नेताहरु नै बढी देखिन्छन् । यद्यपी, उनीहरु आफुलाई युवा नेता नै भन्ने गर्छन् । नेपाली काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनले शेर बहादुर देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको छ । यसै मेसोमा हाँस्य कलाकार सिताराम कट्टेल धुर्मुस ..
दिपकराज गिरीको आज २९ औँ म्यारिज एनिभर्सरी : मेनुकासँगको यात्रा कहीँ कठिन भएन
हास्यकलाकार दिपकराज गिरीले मेनुका गिरीसँग लगनगाँठो कसेको आज २९ औँ बर्ष पुगेको छ । गिरीले आज बिहानै फेसबुकमा श्रीमतीसँगको फोटो अपलोड गर्दै आज आफ्नो म्यारिज एनिभर्सरी भएको खवर दिएका हुन् । Deepak Raj Giri २०४३ साल फागुन २५ गते …..आज हिसाब गर्दा २९ बर्ष पुगेछ… यात्रा कहि कठिन महसूस भएन यो सूझबूझ पूर्ण सहयात्राका लागि [..
जय सम्भो…..हास्यकलारको महाशिवरात्री फोटोमा हेर्नुहोस्
हसाउने राजाराजेन्द्र अब गीतकार , संगीतकार पनि (भिडियोसहित)
हास्यकलाकार राजाराजेन्द्र पोखरेलले आफ्नो शब्द र संगीतमा घर होईन मन ठूलो भएको बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन् । उनको शब्द संगीतमा, योजना पुरीले गाएकी छिन् । यसअघि, उनको संगीतमा, बद्री पंगेनी, शिरिष देवकोटा लगायतले स्वर दिईसकेका छन् । यस्तै उनकै स्वरमा, चन्द्रमा झैँ सितल देऊ, महङ्गो रैछ लगायतका गीत आईसकेका छन् । ललितकलामा संगीत सिके..
पढ्नुहोस् सन्दीप क्षेत्रीसँगको रमाईलो कुराकानी
व्हाट् द फ्लप्स् कार्यक्रमका प्रस्तोता सन्दीप क्षेत्री स्ट्याण्ड अप कमेडीमा अग्र स्थानमा छन् । उनी नै त्यस सोका निमार्ता तथा निर्देशक पनि हुन् । यसका अलावा उनी ठूला पर्दाका चलचित्रमा पनि देखिएका छन् । ६ एकान ६ मा उनले गरेको अभिनयको प्रशंसा भयो । रिलिजको संघारमा रहेको चलचित्र हाउ फन्नीमा पनि उनको भुमीका छ । […]
जनचेतनाका लागि धुर्मुस सुन्तली बने पञ्चरत्ने र पार्बती
हास्यकलाकारद्धय सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे नयाँ रुपमा सार्वजनिक भएका छन् । सर्ट मुभि ज्योति (द पावर अफ लाईट) मा धुर्मुस र सुन्तली नामले स्थापित कट्टेल र घिमिरे पञ्चरत्ने र पार्बतीको भूमीका देखिएका हुन् । बालमैत्री समाजको महत्व र आवश्यकता औँल्याउने सर्ट मुभि ज्योतिको अहिले नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा छाँयाङ्कन भइरहेको छ । स..
छक्का पंजा गर्न किन भ्याएनन धुर्मुसले ?
हिजो दिपकराज गिरीले फेसबुकमार्फत छक्का पंजामा को–को रहनेबारे फाईनल जानकारी गराए । उनले दिएको जानकारी अनुशार, दीपाश्रीले निर्देशन गर्ने चलचित्रमा दिपकराज गिरी, प्रियङ्का कार्की, जितु नेपाल, शिवहरी पौडेल, किरण केसी, केदार घिमिरे , बुद्धि तामाङ, बसुन्धरा भुसाल, नम्रता सापकोटा, बर्षा शिवाकोटी लगायत मुख्य भुमीकामा रहनेछन् । यस्तै फिल..
छोरीलाई, धुर्मुस–सुन्तलीको पत्र
मायाकी खानी शुबिहानी !! मानिसहरु भन्छन् छोराछोरी आफ्नै शरीरको विस्तारित रुप हो भनेर । सायद यसो भन्नुको मतलब भौतिक रुपमा सधैं सँगै हुनु भनेको होला । तर, तिमी हाम्रो प्रेमको, भावनाको, कल्पना, चाहना, धेरै कुराको विस्तारित रुप हौ । पत्र मार्फत तिमीलाई हाम्रो बाध्यताका निहँु सुनाएर आफ्नो मनको असन्तुष्टि, ग्लानी र पछुतो पखाल्ने प्रयास..
मुसहर बस्ती सफाईमा धुर्मुस–सुन्तली बालक्लबका बालबालिकाहरु
महोत्तरी बर्दिबासका मुसहर बालबालिकाले सरसफाई सप्ताह सुरु गरेका छन् । उनीहरुले धुर्मुस–सुन्तली बाल क्लब गठन गरी सरसफाई सप्ताह सुरु गरेका हुन् । धुर्मुस – सुन्तली सरसफाई अभियानलाई साथ दिदै आफुहरुले गाउँटोल सफाई थालेको , नवयुग बालक्लवका अध्यक्ष अञ्जली सदाले बताएकी छिन् । बालबालिका गाउँटोल सफा गर्न निस्किएपछि, टोलबासीहरु खुसी भएका छ..